Qoorqoor oo codsaday inuu marti galiyo Dhuusamareeb5 | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor oo codsaday inuu marti galiyo Dhuusamareeb5
Madaxweyne Axmed Qoorqoor ayaa ka codsaday madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo inuu marti galiyo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee Dhuusamareeb5
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Magaalada Dhuusamareeb waxaa saacado kahor ka dhacay shir looga hadlayo arrimaha amniga, waxaana qeyb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya.
Haddaba Keydmedia Online ayaa ogaatay xog ku saabsan in Axmed Qoorqoor uu aad u daneenayo qabashada shirka la filayo inuu noqdo mid kama dambeys ah, kaasoo sida la saadaalinayo lagu soo gaba-gabeyn doono murankii hareeyay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe.
Guddigii farsamada ee maalmahan ku shirsanaa magaalada Baydhabo ayaa xalay xilli dambe soo saaray heshiis, iyagoo tilmaamay in is af-garad laga gaaray arrimihii lagu muransanaa, iyadoo lagu shaaciyay halkaas in 18 ka bishan oo ku beegan berri ay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay kulmi doonaan si ay usaxiixaan heshiiska.
Axmed Qoorqoor oo horay u qabtay shirar dib-u-heshiiseeneed Duusamareeb1,2,3 iyo 4 ayaan wax natiijo ah kasoo bixin dhammaantood, iyadoo haatan uu codsaday in Dhuusamareeb 5 la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday ee Farmaajo uu sheegay in Garowe la isugu imaan doono shir kama dambeys ah, balse Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa diiday marti gelinta shirka, waxaana laga yaabaa in Farmaajo uu aqbalo codsiga Qoorqoor ee marti gelinta shirka kama dambeysta ah ee lagu dhammeynayo heshiiska la xiriira arrimaha doorashooyinka.